Margarekha नमुना नगरको रुपमा विकास गर्न प्रतिवद्ध छु : खड्का – Margarekha
नमुना नगरको रुपमा विकास गर्न प्रतिवद्ध छु : खड्का
कोहलपुर नगर विकास समितिले नयाँ नेतृत्व पाएसँगै तिब्रतर रुपमा विकासका गतिबिधिहरु संचालन गर्दै आएको छ । केही वर्षयता छायाँमा रहँदै आएको नगर विकास समितिले पछिल्लो समय उल्लेखनिय कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ । नगर विकासको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर पनि धेरै कामहरु गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पेश गर्न सफल भएको छ, कोहलपुर नगरविकास समिति । नगर विकास समिति कोहलपुरले शहरी विकासको रुपमा काम गर्न थालेको ३५ वर्ष पार भइसकेको छ । तर विकासको रुपमा देखिने खासै कुनै ठूला परियोजनाहरु बनेका छैनन् । उदयमान नगरीको रुपमा रहेको कोहलपुरलाई थप ब्यवस्थित र सुविधामुखी शहरका रुपमा स्थापित गराउने जिम्मेवारी समेत नगरविकासको काँधमा आएको छ । यसै सन्दर्भमा कोहलपुर नगर विकास समितिले तय गरेका आगामी रणनिति तथा योजनाका बारेमा समितिका अध्यक्ष अबराज खड्कासँग मार्गरेखा अनलाईनकालागि संगिन शर्माले गरेको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको अन्तरवार्ताका सम्पादित अंशहरु । यस अंकमा समेटेका छौं ।
१) नमस्कार, आजभोली केमा ब्यस्त हुनुहुन्छ ?
– कार्यलय ब्यवस्थापन मै ब्यस्त छु । भर्खर मात्र जिम्मेवारी सम्हालेकाले कार्यालय ब्यवस्थापनमा अलि बढि समय खर्चिनुपरेको छ ।
२) पछिल्लो समय चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्छ, किन ?
– त्यो त तपाईहरुले मुल्याङ्कन गर्ने कुरा हो । म कुरा भन्दा काममा विश्वास गर्ने मान्छे हुँ । नगर विकास समिति कोहलपुरको अध्यक्षमा मनोनित भएको २ महिनाभित्रै धेरै ब्यवधान पार गर्न सफल छु । जसले मलाई थप जिम्मेवारी बहन गर्ने हौसला बढाएको छ । त्यसैले सबैको चर्चाको विषयवस्तु बनेको हुन सक्छु ।
३) तपाई कोहलपुर नगर विकास समितिको अध्यक्ष भएको दुई महिना पुगेको छ । अहिलेसम्म तपाईले गरेका प्रमुख कामहरु के के हुन् ?
– म कोहलपुर नगर विकास समितिको अध्यक्ष भएर आएको करिव अढाई महिना पुगेको छ । यो अवधीमा मैले गरेका प्रमुख तीन काममध्ये पहिलो काम भनेको कोहलपुरमा राष्ट्र बैंकको जग्गाको विवाद साम्य भयो भने दोस्रो काम भनेको केही कामह ? यस्ता थिए जो दुई चार वर्षदेखि अड्किएका कामहरु अगाडि बढेका छन् भने कही काम अझै लास्ट लास्ट आवरमा छन् । र तेस्रो काम भनेका यहाँ सिटी हल निर्माण हुने भएको छ । त्यसको लागि अब लगतै काम शुरु हुँदैछ ।
४) राष्ट्र बैंकको काम गर्ने सन्दर्भमा शिव मन्दिरको उत्तरपट्टिबाट ट्रयाक निकाल्ने कुरा छ । राष्ट्र बैंकले ट्रयाक नखोल्दिएको कारणले काममा अवरोध भयो भनेर आफुले गर्ने काम र कोनविसलाई दिने रकम समेत रोक्यो यसमा के पहल गरिरहनु भएको छ ?
– यहाँ कुरा के हो भने राष्ट्र बैंकसँग भएका कुराहरु, छलफलहरु, बहसहरु र हाम्रो केही आर्थिक कुराहरु पनि छ । ८ करोड ४४ लाखको कुरा छ त्यो लगभग छिनोफानोको नजिक पुगेको छ । उनीहरु हाम्रै सम्झौतामा अडिक छन् । तिहार अघि हामीले एउटा फर्मेट राष्ट्र बैंकमा पठाएका छौं । पठाइसकेपछि त्यो राष्ट्र बैंकले कानुन सम्वत अध्ययन गर्दैछ रे भन्ने कुरा आएको छ । र त्यो भयो भने केही दिनमा सम्झौताका लागि हामी काठ्माण्डौ जानुपर्ने या राष्ट्र बैंकको टोली यहाँ आउने स्थिति हुँदैछ ।
जहाँसम्म यो मन्दिरको कुरा छ, मन्दिरकोहकमा प्रष्ट रुपमा भन्ने हो भने हिजोका प्राविधिकहरुले गरेको कम्जोरीका कारणले आज हामी त्यसकोे सिकार भएका छौं । चाहे त्यो हाम्रो नगर विकासमा भएका अमिन र प्राविधिक इन्जिनियरहरुको कमजोरी होस्, चाहे
राष्ट्र बैंकबाट आएका अमिन र प्राविधिकहरुको कमजोरीहरु होस् ।
यस अघिका दुईजना अध्यक्षहरुले के–के काम गर्नुभयो भन्ने तर्फ मजान चाहदैन । तर यहाँ केही मिस्टेकहरु भएका छन् । लक्ष्मणराज पौडेल अध्यक्ष भएर आएलगत्तै नगरविकासको २ करोड ४४ लाख रुपैंयाँ बिना ब्याज बैंकमा थन्किएको कुरा त हामी सबैलाई थाहै छ । अद्यपी त्यसका बारेमा दुई वर्षसम्म किन केही बोलिएन ? किन त्यसलाई फुकुवा गरिएन ?
अर्को कुरा टेकनारायाण भुषालले १५ महिनाको अवधी राखेर जुन जग्गाको सम्झौता गर्नुभयो, त्यो काम विवाद आइसकेपछि फेरि सम्झौता गरौं भनेर राष्ट्र बैंकमा पहल गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? भन्दा कहीँबाट पहल भएको पाइएन ।
४ वर्षको अवधीसम्म अट्कीएको कुरा म अध्यक्ष भएर आय लगत्तै फुकवाको लागि पहल गरियो र अहिले राष्ट्र बैंक पनि सकारात्मक भएको छ । विगतमा भएको विवादका कारण सुर्खेत, दाङ लगाएतका जिल्लामा सर्ने तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंक अहिले हाम्रै कोहलपुरमा बस्न राजी भएको छ, यो हाम्रो सबैभनदा ठुलो उपलब्धी हो ।
५) मन्दिरको विवाद टुङ्गीएको हो त ?
– मन्दिर ब्यवस्थापन समिति, नगरपालिकाका मेयर तथा नगर विकासका प्रतिनिधीहरुको सर्वपक्षिय छलफलबाट मन्दिरको विवाद टुङ्गीएको छ । उहाँहरुको आस्थालाई चोट नपुग्ने किसिमले नगर विकास समितिले संरचना निर्माणका लागि जग्गा समेत प्रदान गरेको छ । मन्दिरबाट ५०÷६० मिटर पूर्व साइटमा हामीले ७ कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराउने र अहिलेको भन्दा
राम्रो संरचना निर्माणका लागि मन्दीरलाई ८० लाख बजेट छुट्याएका छौ ।
६) राष्ट्र बैंकलाई काम थाल्न अब के समस्याले रोकेको छ, कहिलेबाट काम थाल्ने योजनामा हुनुहुन्छ ?
– त्यो त बैंकले आप्mनो प्रक्रियामा गएर तय गर्ने कुरा हो । हाम्रो तर्फबाट राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्ने सबै सुविधाहरु उपलब्ध गराएका छौ । अब राष्ट्र बैंक यहाँबाट अनेत्र जाने सम्भावना छैन । हामी सबैले आफ्नो सर्त अनुसार काम गर्न तयार नै छौ । राष्ट्र बैंकले पनि त्यही कुरा भनेको छ । राष्ट्र बैंकलाई हामीले लिखित मौखिक दुबै रुपमा अनुरोध गरेका छौं र उसले बाउन्डरी वालको काम शुरु गर्ने प्रक्रिया समेत अगाडी बढाईसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले पनि हाम्रो अनुरोधमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई कोहलपुरमै बैंकको संरचना निर्माण गर्न निर्देशन दिए बमोजिम, पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले पनि बढी चासो देखाएको हामीले पाएका छौं ।
७) लामो दुरीको बसपार्क बनाउने कुरा कहाँ सम्म पुग्यो ?
– लामो दुरीको बसपार्कको लागि भनेर गुरुयोजनामै स्पष्ट लेखिएको छ । यसको लागत दिन प्रतिदिन बढेको बढ्यै छ । लामो दुरीको बसपार्कको डिजाइन गर्ने र त्यसको पुर्वाधार बनाउन केही दिन अघि आएको नगर विकास कोष (टिडिएफ) ले ७० करोडको कुरा लिएर आएको छ । हामीसँग ७० करोड लगानी गर्न सक्ने क्षमता छैन र राज्यसँग पनि त्यो अहिले नै सम्भव देखिदैन । त्यसैले नगरपालिकासँग सल्लाह गरेर म आफै काठमाण्डौं गएर टिडिएफका उच्च पदाधिकारीलाई भेटेर कुरा गरेको छु । हामीले कोहलपुर नगरपालिकालाई ३० वर्षको लागि जज्गा भाडामा दिनेगरी प्रस्ताव पठाएका छौं । बसपार्क बनेपछि आपसी समझ्दारी गरेर भाडादरको टुङगो लगाउने समेत भनेका छौं ।
८) तपाई समितिको अध्यक्ष नियुक्त भई आइसकेपछि अहिलेसम्म पनि तपाइको समितिले पुर्णता पाएको छैन, समिति पुरा नहँुदा नीतिगत निर्णय लिन ब्यवधान सृजना भएको छैन ?
– महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो । अहिलेसम्म अध्यक्ष गइसकेपछि सदस्यहरु स्वतः जाने परिपाटी थियो तर अध्यक्षले राजिनामा दिइसकेपछि पनि सदस्यहरुले राजिनामा नदिएपछि मलाई काम गर्न असजिलो भयो । राजिनामा गराइदिनु प¥यो भनेर कुरा पनि राखे । शुरुमा राजिनामा दिने कुरामा सबै सहमत पनि हुनुहुन्थ्यो तर पछि पहिलेको अध्यक्षको पार्टीको बैठक बसेर समय रहँदासम्म राजिनामा नदिने भन्ने निर्णय गरेको खबर बाहिरिएको छ । त्यसैले उहाँहरुले राजिनामा दिनु भएन । अब उहाँहरुको समयावधि पनि सकिसकेको छ । त्यसैले मैले नियुक्ति गर्ने पाँच जना सदस्यहरुमा पार्टीमा केही छलफल चलाएको छु । र मोटा मोटी केही नामहरुमा पनि सहमति भएको छ । निर्वाचन आयोगबाट सहमती प्राप्त भयो भने छिट्टै समितिलाई पूर्णता दिने सोचाईमा छु ।
९) अहिलेसम्म तपाईले गरेकका नितिगत निर्णयहरु बताईदिनुहोस न ।
– म नगरविकास समितिमा आइसकेपछि पहिलो पटक राष्ट्र बैंकको जग्गाको बारेमा सर्वदलिय र सर्वपक्षिय एउटा बैठक बोलाएँ । जसबाट वर्षैदेखी विवादित रहँदै आएको राष्ट्र बैंकको जग्गा छुट्टाउन हामी सफल भएका छौं साथै बंकसँगै रहेको मन्दीरको ब्यवस्थापनमा पनि सफलता हात परेको छ । त्यसैगरी वोर्डको बैठकबाट यस वर्षको लागि करिव ३० करोड ४० लाखको बजेट विनियोजन गर्न सफल भएका छौं । नगर विकास समितिको ईतिहासमै पहिलो हामी बजेट विनियोजन गर्न सफल भएका छौं ।डुडुवा तटबन्धको काम शुरु गर्ने, छोटो दुरीको बसपार्क कालोपत्रे गर्नलाई ४ करोड बढी रकम विनियोजन गर्ने लगाएत धेरै अर्को महत्वपूर्ण काम सुरु गरिएको छ ।
टाउनलाई विद्युतीकरण गर्नुका साथै घडेरी विक्रिको लागि टेण्डर खुल्ला गर्ने काम गरिएको छ । त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानी अनुसार थप योजना निर्माण गरि प्रक्रियामा अघि बढ्ने छु ।
१०) नगरविकास समितिले विभिन्न स्थानहरुमा सटर निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ, त्यसको तयारी कहाँसम्म पुग्यो ?
– नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको बसपार्कमा अस्थायी प्रकृतिका ट्रष्टहरु बनाएर भाडामा दिँदा शुरुदेखि अहिलेसम्म पनि बसपार्क बजार सुधार समिति र नगर विकासको बिचमा बेलाबेलामा बादविवाद भइरहेकै छ । यो यहाँका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु र नगर विकास समितिले गरेका कतिपय सहमति र सम्झौताका कागजातहरुले पनि त्यस्तो समस्या पारिरहेको छ । त्यसैले नगर विकास समितिले अरु नयाँ सटर बनाएर भाडामा दिने कुरा अहिले सम्भव छैन । आर्थिक हिसाबले पनि ३÷४ करोड खर्च लाग्ने देखिन्छ । नीतिगत हिसावले पनि तत्काल त्यस्तो गरिहाल्न सम्भव देखिदैन ।
दोस्रो कुरा यो काम गर्न हामीले यहाँबाट मात्र निर्णय गरेर सम्भव छैन । विभाग र मन्त्रालयले पनि स्वीकृती दिनुपर्छ । मैले सटर बनाउने अनुमतिका लागि मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छु, तर अहिलेसम्म केही निर्णय भएको छैन ।
११) नगर विकास समितिको क्षेत्राधिकार भित्र जग्गा धनिहरुले घर बनाउँदा निर्माण सामाग्रीहरु सडक तथा पेटीमा यत्रतत्र राख्दा नाली पुरिने, भत्किने र सडक समेत भत्किने भइरहेको पाइन्छ । यस्तो कार्यलाई रोक्न र व्यवस्थित गर्न नीतिगत तथा व्यवहारिक केही योजना बनाउनु भएको छ ?
– हिजोदेखि नै यहाँ नगर विकासले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र सडक तथा पटीमा राखिएका निर्माण सामाग्री हटाउन र व्यवस्थित गर्न पटक पटक सूचना जारी गर्ने त्यसपछि नगर विकास समितिले पनि अनुगमन नगर्ने र सम्वन्धित जग्गा धनिहरुले पनि नटेर्ने अवस्था देखिदै आएको छ । यसलाई नीतिगत रुपमा नै व्यवस्थित गर्न अब समिति पूर्ण भइसकेपछि मैले जसले निर्माण सामाग्राी राख्दा सडक र नाली भत्किने, पुरिने हुन्छ, त्यसैले उसले राखेको निर्माण सामाग्रीले भत्किएको र पुरिएको ठाउँमा नगर विकास समितिले बनाउँदा जस्तो संरचना बनाएको थियो त्यस्तै संरचना बनाउनु पर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी घर बनाउने भन्दा पहिले सम्वन्धित घर धनिसँग सम्झौता गराउँने प्रस्ताव लिएर जाने सोचाई बनाएको छु । यसबाट समस्या हल हुन्छ भन्ने लागेको छ ।
१२) अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
– कोहलपुरलाई नमुना नगरको रुपमा विकास गर्ने मेरो योजना रहेको छ । त्यसै बमोजिम निरन्तर कार्य सम्पादन गर्दै आईरहेको छु । अहिलेसम्म सबै पक्षबाट सहयोग प्राप्त भएको छ, आगामी दिनमा समेत यस्तै सहयोगको अपेक्षा गर्दछु । र अन्त्यमा मेरा भनाईहरु राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा यस मार्गरेखा अनलाईन तथा तपाईलाई समेत अभार ब्यक्त गर्न चाहन्छु । धन्यवाद ।
१४ कार्तिक २०७४, मंगलवार १४:५६ प्रकाशित